Pep Guardiola Oo Ku Adkeesanaya In Andres Iniesta Uu Keeno Kooxda Manchester City – Gool FM
Pep Guardiola Oo Ku Adkeesanaya In Andres Iniesta Uu Keeno Kooxda Manchester City
(Premier League) 24 Abriil 2018 Pep Guardiola ayaa isku diyaarinaya isku day kale uu ku doonayo inuu ku qanciyo xidiga khadka dhexe ee Andres Iniesta imaatinka safka kooxda Manchester City, kadib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee soo aadan, halka uu kaga dhaqaaqi lahaa horyaalka dalka Shiinaha.
Sida ay wararku xaqiijinayaan Andres Iniesta ayaa cagta saaray wadadii uu kaga bixi lahaa kooxda Barcelona, tan iyo wixii ka dambeeyay kulankii finalka ee Copa del Rey ay kula ciyaareen kooxda Sevilla.
Sida uu daboolka ka qaaday wargeyska “AS” ee dalka Spain macalinkii hore kooxda Barcelona Pep Guardiola ayaa rajo xoogan ka qaba in Andres Iniesta uu ku qanciyo imaarinta kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League ee Man City xili ciyaareedka soo aadan, si ay markale u wada shaqeeyaan.
Andres Iniesta ayaa dhawaan qirtay inuu go’aan ka gaari doono mustaqbalkiisa kooxda Barcelona isbuucyada soo socda, haddii uu baaqi ku sii ahaando garoonka Cump Nou ama uu ka tagayo.
Waxaa jiraa warar suuqeed ku aadan in Andres Iniesta uu dalab waali ah uu ka helay kooxaha ka dhisan horyaalka Chinese Super League qaar kood si uu ugu dhaqaaqo dhamaadka xili ciyaareedkan.